Kulula ukuyenza kunye nencasa yemicrowave broccoli ikeyiki | Ukupheka kweKhitshi
Ikhekhe leMicrowave broccoli
UCarmen Guillen | | Izitya, Iiresiphi zemifuno, Iiresiphi ezikhethekileyo, Iiresiphi ezilula
Into elungileyo malunga nokufumanisa iiresiphi ezintsha, ukukhanya kwisisu kwaye kuyakhawuleza kwaye kulula ukwenza kukuba siwenze kwangoko ukuba siwazise apha. Olu hlobo lweendlela zokupheka zamkelwe kakuhle nguwe, kwaye ngoku, ehlotyeni (ubuncinci apha eSpain kunjalo kwaye kushushu kakhulu), asifuni kutya izinto ezishushu kakhulu kwaye asifuni kuchitha kakhulu ixesha ekhitshini esenza isidlo sasemini esininzi okanye isidlo sangokuhlwa.
Kungenxa yoko le nto siqinisekile nge-100% ukuba uya kuyithanda le recipe ... Kuya kufuneka uyizame!
Ikhekhe leMicrowave broccoli yindlela elungileyo yesidlo sangokuhlwa okanye yokuhamba kunye nezifundo zokuqala xa kutyiwa. Kuyinto emnandi kwaye kulula kakhulu ukuyenza!
Ixesha lokupheka: 17 m
Ixesha elipheleleyo: 27 m
Iigram ezingama-500 zebroccoli (eyayiphekwe ngaphambili)
Iigrama ezingama-150 zeeshizi ze-cheddar (ezichaziweyo)
200 ml ubisi
Ipiniki yomhlaba emnyama
Into yokuqala esiza kuyenza yile Pheka i-broccolikwaye ukuba asiyipheki. Kuya kwanela ukuyongeza embizeni, kunye namanzi ayigubungeleyo ngokupheleleyo kunye netyuwa. Sibilisa phantse I-5 minutos.
Okwangoku, siza kusasaza ioyile yomnquma kwisitya esiza kuyisebenzisa kwikhekhe lethu le-broccoli. Ngale ndlela, siyaqinisekisa ukuba ayincamathelani ezindongeni kwaye singayisusa ukuze kube lula ukuyibeka.
Into elandelayo iya kuba kukuthatha yiyo y yongeza amaqanda ama-3, i-200 ml yobisi (sisebenzise i-semi-skimmed eqhelekileyo), a intsalela yetyuwa njenge pepper emnyama yomhlaba. Sibetha kakuhle de sifumane umxube ofanayo.
Xa ibroccoli ibilisile, siza kuyazisa ngokulinganayo kwisitya kwaye sidibanise umxube wangaphambili esiye sawubetha kwisitya. Into yokugqibela esiza kuyidibanisa iya kuba yile I-cheddar cheese taquitos. Siza kuzisasaza kakuhle kwisikhongozeli (hayi kumphezulu kuphela kodwa nangaphakathi).
Kwaye into yokugqibela iya kuba kukwazisa kwi- microwave, ngamandla apheleleyo, malunga nemizuzu eyi-15-17.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Ikhekhe leMicrowave broccoli
Intlanzi kwi-microwave sauce